उत्तर डकोटा WIC | JPMA, Inc.
महिला, शिशु र बच्चाहरू (WIC)
विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम
उत्तर डकोटा डब्ल्यूआईसी तपाईको परिवारलाई खुशी, स्वस्थ र फलदायी देख्न चाहन्छ। हामी तपाईंलाई गर्भावस्थादेखि डेलिभरी र तपाईंको बच्चालाई बच्चाबाट child's औं जन्मदिनसम्म सहयोग गर्दछौं
"खोज्नुहोस्"उत्तर डकोटा WIC अधिकृत फुटकर बिक्री”चिन्ह।
WICShopper अनुप्रयोगमा उत्पादनहरू स्क्यान गर्नुहोस् तिनीहरू सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू उत्तर डकोटा WIC- योग्य छन्। प्रमाणित गर्न याद गर्नुहोस् कि उत्पादन खरिद गर्नु अघि तपाईको जाँचमा छापिएको खाद्य पदार्थहरू वास्तवमै छन्!
WICShopper (वा तपाइँको छापिएको संस्करण) मा तपाइँको उत्तरी डकोटा WIC स्वीकृत फूड सूची (AFL) प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ WIC खाद्य पदार्थहरू हेर्नका लागि।
अनुमति - यो वस्तु WIC अनुमोदित छ! एउटा कुरा जान्नको लागि तपाईले कुनै वस्तुलाई अनुमति दिईएको हुनसक्दछ, तर यो तपाईंको WIC फूड बेनिफिटको अंश होइन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, एक बर्षको बच्चा पूरै दुध पाउँछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक बर्षेको बच्चा छैन भने, पूरा दूध तपाईंको WIC फूड बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं रजिस्टरमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन। WIC लाभहरू WICShopper अनुप्रयोगमा लिंक नभएसम्म, यो "अनुमति दिईएको" सन्देश तपाइँको परिवारका लाभहरूमा लागू हुन सक्दैन।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब उत्तरी डकोटा WIC ले यस वस्तुलाई अनुमोदन गरेको छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ WIC खाद्य सुविधाहरूसँग यो खाना किन्न सक्षम हुनुपर्दछ, हामीलाई "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"यो अनुप्रयोगमा बटन।
अंग्रेजी उत्तर डकोटा WIC खाद्य सूची
यो संस्था एक समान अवसर प्रदायक हो। (WIC nondiscrimission वक्तव्यको लागि लिंक क्लिक गर्नुहोस्)